isifundo se-Android: ungayifihla njani imifanekiso kwi-prying yamehlo usebenzisa i-keepsafe
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isifundo se-Android: ungayifihla njani imifanekiso kwi-prying eyes usebenzisa i-KeepSafe
Isifundo se-Android: ungayifihla njani imifanekiso kwi-prying eyes usebenzisa i-KeepSafe
Ukuba wena & apos; ubuzibuza ukuba ungazifihla njani iifoto kwifowuni ye-Android, emva koko uza kwindawo efanelekileyo!
Ii-smartphones zethu zineenkumbulo ezininzi, kwaye uninzi lwazo ziza ngendlela yeefoto. Ngelixa uninzi lweefoto esizithathayo zingenabungozi kwindalo, uninzi lwabasebenzisi ekugqibeleni luza kudibana nokufumana okanye ukufumana iifoto ezibuthathaka ezingcono.
Kule mihla, iiapos ze-Android tutorial, siya kukubonisa indlela yokufihla iifoto kuso nasiphi na isixhobo se-Android usebenzisa i-KeepSafe, usetyenziso olusimahla olufumaneka kwiVenkile yokuDlala. Sikhe sakubonisa ngaphambili indlela yokwenza fihla nayiphi na ifayile kwisixhobo se-Android ngaphandle kokufaka nayiphi na usetyenziso . Ukuba u-apos uziva uphazamisekile malunga nokuvumela usetyenziso ukuba lufikelele kwiifayile zakho ezibuthathaka, isisombululo esinge-app ngokuqinisekileyo yindlela yokuhamba. Kwelinye icala, ukusebenzisa abaphathi befayile ukwenza iifolda ezikhethekileyo ezifihliweyo kunye nokuhambisa ngesandla yonke into ejikeleze isenokungabi lolona khetho lufanelekileyo kubasebenzisi abaphambili.
I-KeepSafe isebenza njengegumbi elinikezela ukubamba nayiphi na ifoto ofuna ukuyifihla kwabanye abasebenzisi kwi-smartphone yakho ye-Android okanye ithebhulethi. Siza kuyisebenzisa ukwenza igumbi elingasese ngasese, sihambise iifoto kulo, kwaye silondoloze iifayile kwigumbi labucala kwilifu.
Inyathelo 1. Khuphela i-KeepSafe kwivenkile kaGoogle Play . Insiza isimahla ukuyisebenzisa, kodwa ukubhaliswa kwenyanga kuyafuneka ukuze uvule amanqaku aphezulu.
Inyathelo 2.Nje ukuba usetyenziso lufakwe, landela imiyalelo ekwiskrini ukuseta i-KeepSafe kwisixhobo sakho se-Android. Ekupheleni kwenkqubo, wena & amp; ll -kuya kufuneka wenze i-PIN kwigumbi elingaphantsi; Qiniseka ukuba useta igama lokugqitha ekulula ukulikhumbula kodwa kunzima ukuqikelela. Njengayo nayiphi na ikhowudi yokuseta ikhowudi, thintela ukukhetha iikhowudi ezinje ngo-1234 okanye 0000.
Inyathelo 3.Ukongeza iifoto kwigumbi eligcina i-KeepSafe, ungakhangela kwi-pic kwigalari, ucofe isabelo, emva koko ukhethe i-KeepSafe kwimenyu. Oku kuyakususa ifoto kwigalari yefowuni kwaye uyihambise kwigumbi lakho langasese.
Inyathelo 4 (Ngokuzithandela).Olunye unyango oluncinci oluhle oluvela kubaphuhlisi kukuba kwinguqulelo yasimahla ye-KeepSafe ivumela ukhetho lokugcina iifayile zabucala kwilifu. Ukuba awunqweneli ukuvumela iifoto ezibuthathaka ukuba zigcinwe efini, awukwenziunayoukusebenzisa inqaku. Abanye, ukhetho lokugcina ilifu yeyona ndlela ifanelekileyo yokuthintela ukuphulukana neefoto ezizodwa kwimeko yokubiwa kwefowuni okanye ukonakala ngengozi.
Amanyathelo ebhonasi.Ukuba & apos ujonge ukuya kwimayile eyongezelelweyo, ungasoloko ukhetha ukubhaliselwa kwepremiyamu ye-KeepSafe. Ixabiso le- $ 4.99 lenyanga linokuvakala ngathi lininzi, kodwa emva koko, abaphuhlisi bayaphosa kwiqela lezinto ezipholileyo. Enye yezi kukukwazi ukwenza iPIN engeyonyani onokuyisebenzisa ukukhohlisa abanye abasebenzisi ekukholelweni ukuba bafumene ukufikelela kwiifoto zakho ezifihliweyo. Abanye banakho ukufihla i-KeepSafe kwi-app ye-utility (i-app yangempela iya kuvula kuphela ngokucinezela ixesha elide kwi icon ye-KeepSafe) okanye inkqubo ye-'Break-in Alert 'elumkisa umsebenzisi nayiphi na imizamo yokungena engaphumeleli.
Ngoku ukuba uyazi ukuba ungazifihla njani iifoto kwifowuni yakho ye-Android ngeGcinaSafe, qiniseka ukuvavanya ngononophelo ukuba zeziphi iifoto ekufuneka zivele kwigalari yekhamera, kwaye zeziphi ezona zishiyekileyo zifihliweyo kwigumbi labucala. Ukuba ungena kuzo naziphi na iingxaki, qiniseka ukusishiyela iikhomenti ezingezantsi zichaza umzabalazo wakho!
Eyona nto ibalaseleyo kwii & smartphones
umnxeba wokudlulisa usetyenziso lwe-android
Iipilisi zeAmazon prime day
I-Fossil ine-smartwatch ye-Wear OS entsha kodwa akusekho hlaziyo lwezixhobo ezikhoyo kumbhobho
Eyona nto ibalaseleyo kwi-Samsung Galaxy Buds ijongene ngoku
I-T-Mobile iphehlelela ukuthengisa kwangoko ngoLwesihlanu oMnyama, iBOGO inikezela nge-iPhone 8, i-Galaxy S8 / S8 +, Qaphela i-8, i-LG V30, kunye nokunye
Iipilisi ezilungileyo kakhulu zabantwana
Indlela yokuthatha umfanekiso weskrini kwi-Samsung Galaxy Note 8
Inkxaso ye-Samsung Galaxy S21 eSIM kwiVerizon, AT & T, okanye kwiT-Mobile
Ezona zihamba phambili ze-USB Type-C ezenzelwe ii-smartphones ze-Android kunye neetafile
Eyona midlalo ilungileyo yokudlala ngoLwesihlanu
Jonga, maqabane! Nazi iiapos zendlela yokudlala ichess kunye nabahlobo bakho kwiFacebook Messenger